Teny 6 fanampiny avy amin'ny rakibolana Narcissist izay tena ilainao ho fantatra - Mpanararaotra
Sarotra ny tontolon'ny mpampihorohoro. Miaraka amin'ny spectrum sy manerana ny karazany isan-karazany dia misy fomba fanao isan-karazany. Mbola toy izany ihany ny valiny amin'ny farany.
Ao amin'ny lahatsoratra teo aloha , Nampahafantariko anao fehezan-teny enina ianao, ary ity misy enina hafa izay hanazava bebe kokoa an'ity karazana toetra sarotra sy misy poizina ity.
Ny lalao narcissists iray manontolo dia momba ny fanaraha-maso sy ny fanjakazakana. Raha vantany vao tsy afaka mandainga, misoloky, manararaotra na mamadika intsony ilay narcissist, satria nahavita tamin'ny farany ilay niharam-boina avelao ny fifandraisana , hanao fanentanana manosika azy ireo izy ireo.
Natao ity fampielezan-kevitra ity mandratra ny sakaizany taloha araka izay tratra. Satria simba ny ego marefo (fa goavana) ny narcissist dia hataon'izy ireo izany mba hamaliana ny valifaty ataon'izy ireo.
Ny fifandraisana iray manontolo dia ny fampiasana sy fitrandrahana ilay niharam-boina (ara-pientanam-po, ara-tsaina, ara-panahy, ara-bola) ary avy eo, rehefa mety ny fotoana, avelao io olona io ho an'ny olon-kafa hanomboka ny tsingerin'ny fanararaotana mahery vaika indray.
Saingy tsy nifarana araka ny nandrasana ny lalao, noho izany dia hanonitra ilay narcissist amin'ny fiezahana hahita ilay niharam-boina potika tamin'ny fampiasana na inona na inona antony, miaraka amin'ny totaliny tsy fahamelohana na nenina.
Ohatra vitsivitsy amin'ny fanentanana fanosoram-potaka ny:
Famongorana ny sarin'ilay niharam-boina tany am-piasana ka tanjona ny handroahana azy ireo.
Fanodinkodinana olona hafa (nantsoina gidro manidina ) mampijaly na mampijaly ilay olona iharan'izany.
Mandainga amin'ny namana mahazatra momba ilay niharam-boina mba hanokanana azy ireo.
Ity dia tetika tsy mihetsika mba hahazoana fiarovana amin'ny narcissist rehefa tsy azo atao ny 'tsy misy contact' (izany hoe ilay mpampihomehy no lehibeny, na mpiara-miasa taloha sy ray aman-dreny ho an'ny zanany izy ireo).
Ny fitondran-tena mpahay rongony dia novolavolaina mba hialana amin'ny olona. Ny Going Grey Rock dia midika hoe mihetsika sy mahaliana toy ny tena izy: vato fotsy. Midika izany fa mankaleo, tsy misy na inona na inona holazaina mihitsy, tsy manome fampahalalana manokana (na faran'izay kely azo atao), ary amin'ny ankapobeny mitondra tena toy ny sarivongana velona izay tsy zakan'ny barakan'ny fifandirana mety hatsipy ilay mpifoka rongony.
Sarotra ny atao amin'ny voalohany, saingy mihatsara kokoa amin'ny fampiharana… ary ny tena zava-dehibe dia mandeha izy. Ho tsapan'ilay mpifoka rongony fa ny fihantsiana ataon'izy ireo dia tsy misy intsony ny fihetsiky ny niharam-boina. Amin'ny farany, hilavo lefona izy ireo ary hiroso amin'ny lasibatra hafa satria tsy 'mahafinaritra' toy ny taloha intsony ilay niharam-boina.
Vakio ny torolàlana feno amin'ny fandehanana Gray Rock eto .
Fantatro, hafahafa izany. Fa inona izany?
Ireo narcissist dia tsy manana tena ao anatiny izay tsy tena fantany hoe iza izy ireo ary manana fahatokisan-tena ambany izy ireo. Rehefa notezaina izy ireo dia azo inoana fa farafaharatsiny nisy ray aman-dreny sy / na mpikarakara iray izay nanisy ratsy azy ireo (fanararaotana ara-tsaina sy / na ara-pihetseham-po nandritra ny ampahany na tamin'ny fahazazany) na tsara loatra (eritrereto hoe 'ianao no mpanjaka / mpanjakavavy ary ho afaka hanao izay tianao foana ianao - hampifaly anao foana ny olona ”).
Satria tsy nokolokoloina tsara ny maha izy azy ireo dia avy any ivelany, avy amin'ny olon-kafa fa tsy avy ao anatiny. Noho izany dia lasa miankina tanteraka amin'ny olon-kafa sy izay ezahin'izy ireo atao amin'izy ireo izy ireo. Izany no fomba fijanonany miasa fa tsy ory.
Ny famatsiana narcissistic isaky ny tranga manokana dia miankina amin'ny zavatra ilain'ny tena manokana amin'ny alàlan'ny olon-kafa. Ny kojakoja rongony mahazatra indrindra dia: sakafo, firaisana ara-nofo, fitiavana, fialofana, vola, fiderana, fiheverana ary hery. Ity famatsiana ity dia mazàna omen'ny olona mihoatra ny iray amin'ny fotoana iray na fantatra na tsia.
Mandamina ny fiainany manodidina an'ity famatsiana ity ny mpitsabo mpanampy ary mazàna efa misy olon-kafa manome izany - na amin'ny fantsom-pifandraisana - raha sanatria ka tsy mahomby tampoka ny loharano voalohany, na leo ny 'famatsiana taloha' izy ireo.
The Narcissist Covert: Fomba mahamenatra, karazana introverted mety ho narcissists koa
Stockholm Syndrome nahazo ny anarany avy tamina fandrobana banky tany Suède tamin'ny 1973. Nisy takalon'aina maro voarohirohy tamin'ny fandrobana farany niaro sy / na nanana fifandraisana tamin'ireo mpaka ankeriny azy ireo. Stockholm Syndrome dia mitranga rehefa misy takalon'aina voarohirohy tamina fakana an-keriny nifamatotra mafy tamin'ny olona nisambotra azy.
Trauma Bonding dia mitovy amin'ny Stockholm Syndrome. Ireo tra-boina dia manana fihetseham-po lalina sy mahery amin'ireo mpampihomehy izay ifandraisan'izy ireo. Indraindray ireo mpitsabo mpanampy dia hitsabo tsara ireo tra-boina ary amin'ny fotoana hafa dia hitondra azy ireo amin'ny fomba ratsy.
Ny vokatry ny fifamatorana trauma ao amin'ny ati-dohan'ilay niharam-boina dia mitovy amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Mihantona izy ireo ny tsingerina ny tsara (fahasambarana) ary ny ratsy (maratra):
fahasambarana miseho amin'ny endrika, ohatra, fitiavana baomba , fiderana, na firaisana ara-nofo tsara (izay mamokatra oxytocine ao amin'ny ati-dohany, antsoina koa hoe hormonin'ny fahasambarana).
loza mitranga amin'ny endrika fanararaotana, fametrahana ambany ary fanaovana adalana mba hitonona vitsivitsy monja (ireo rehetra ireo dia mamokatra kortisol ao amin'ny ati-dohan'ilay niharam-boina ilay hormonina miady saina izay mampitandrina amin'ny loza).
Ity tsingerin'ny ratsy-tsara tsy misy farany, ratsy-tsara ity,… no iharan'ny fifandraisana amin'ireo niharam-boina ary izany no antony voalohany mahatonga azy ireo ho sarotra amin'ny fivoahana azy io ho amin'ny tsara. Mila miala ara-bakiteny izy ireo toy ny hoe kôkainina.
Ny fifandraisana amin'ny mpifoka rongony dia rollercoasters mampihetsi-po miaraka amin'ny fahatsapana mahery vaika, ary tantara an-tsehatra sy tsy filaminana. Ny olona nihalehibe tao amin'ny fianakaviana tsy miasa miaraka amina ray aman-dreny iray narcissistic farafaharatsiny dia tafiditra tamin'io karazana mavitrika io nandritra ny fahazazany. Hitan'izy ireo fa fitiavana izany. Noho izany, io karazana fifandraisana io no hotadiavin'izy ireo tsy amin'ny fahatsiarovan-tena ho olon-dehibe, tsy fantany ny fanararaotana. Ny fifandraisana 'mahazatra' dia matetika no toa mankaleo sy fisaka ho azy ireo.
Nosoratan'ilay niharam-boina hoe 'Niara-niaina be dia be izahay', raha ny tena izy ilay mpanararaotra no nametraka ilay niharam-boina tamin'ny fahoriana sy ny fijaliana rehetra, nefa tsy nisy hadisoana na nenina na kely aza noho izany.
Ny triangulation dia singa iray misy poizina amin'ny fifandraisana ankolaka sy ny fitondran-tena izay misy olona telo. Ny toetra mampiavaka ny triangulation dia fihetsika miafina, fitaka ary fanararaotana. Mitranga izany rehefa manafika, manala baraka, ary / na manararaotra olona iray ny olona iray amin'ny fiaraha-miasa amin'ny antoko fahatelo (fantatra na tsy fantany).
ny Telolafy Karpman Drama , noforonin'i Stephen Karpman tamin'ny 1968 ary be mpampiasa amin'ny psikolojia sy ny psychotherapy, dia mampiseho ny fifandraisan-doha manimba eo amin'ny olona miady. Manana litera telo izy: ny Tra-boina, ny Mpanenjika ary ny Mpamonjy.
Ilay niharam-boina : mahatsapa fa ny fiainana na ny olon-kafa dia manisy ratsy azy ireo, ary tsy mendrika an'izany izy ireo. Na izany aza, tsy manao na inona na inona izy ireo hanalana ny tenany amin'izany toe-javatra izany.
Ilay Mpanenjika : dia manenjika mivantana na an-kolaka ny olon-kafa, mampianatra lesona azy ireo, na manasazy azy ireo.
Ilay Mpanavotra : mieritreritra fa ny olon-kafa (mazàna ny sakaizany) dia tsy afaka miaina amin'ny fiainana raha tsy eo izy. Mihevitra ny Mpanavotra fa raha mamonjy ilay olon-kafa izy, dia mamonjy ny tenany.
Amin'ny fifandraisana amin'ny mpifoka rongony, na ho ela na ho haingana dia mipoitra foana ny telozoro. Ny narcissists dia mampiasa triangulation ho fitaovana hanamafisana ny hery sy ny fifehezana.
Ity no telozoro ao an-dohan'ny narcissist: Izy no niharam-boina. Ny mpiara-miasa aminy ankehitriny (famatsiana narcissistic taloha) dia ilay Mpanenjika. Ny olon-tiany (mpamatsy narcissistic vaovao) no Rescuer.
Ity no tena Version: ny mpampihomehy no Mpanenjika. Ny mpiara-miasa ankehitriny (famatsiana narcissistic taloha) dia ny Victim (ary matetika koa ilay Mpamonjy). Ilay olon-tiana vaovao dia mpiray tsikombakomba amin'ilay mpampihomehy (na mahafantatra an'io na tsia).
Satria tsy manana tena toetra anaty ny mpifoka rongony, izy ireo manaova sarontava mba hahazoana famatsiana narcissistic amin'ny olona. Iray amin'ireo teknika ampiasain'izy ireo hitaomana ny olona ny fitaratra. Matetika izy ireo dia mampiasa fitaratra (izay saina mena lehibe hijerena) miaraka amin'ireo mpiara-miasa vaovao, ary mody milaza fa fanahy kambana izy ireo ary 'lalao natao tany an-danitra.'
Raha, hono, ny mety ho niharam-boina dia naniry ny handeha ho any Però hatrizay, dia lasa fitsidihan'ny nofinofisin'ny narcissist tampoka koa izany. Raha mieritreritra ny hisoratra anarana amin'ny lesona swing izy / vehivavy, kisendrasendra inona izany satria ny narcissist koa dia mba te hanao an'io! Raha tia horonantsary taloha izy, dia tampoka eo dia hanana famoriam-bola ao amin'ny toerany ilay mpitsabo mpanampy.
ahoana no ahafahako ho tonga ara-pihetseham-po
Sandoka sy ambongadiny daholo izany rehetra izany fa hiezaka ny hampifanaraka ilay volavolan-dalàna ho 'mpiara-miombon'antoka' lasibatr'ilay niharam-boina ity mpitsabo mpanampy ity mba hamitahana azy ireo amin'ny fifandraisana. Tena mahay maka fitaratra izy ireo satria afaka miantso haingana be dia be ny fampahalalana avy eo mandray anjara andraikitra hampieritreritra ilay niharam-boina hoe “Ity no izy. Hitako ny fitiavako ny fiainako. ”
Vaovao aminao ve ireo andianteny ireo? Manampy amin'ny fanazavana zavatra sasany amin'ny fifandraisana taloha (na ankehitriny) ve izy ireo amin'ny fiainanao? Mametraha hevitra etsy ambany.
rehefa tratranao lainga izy
simba ny fiainako izao inona
inona no hatao rehefa tsy tia anao intsony ny vadinao
inona no dikan'ny hoe rehefa miteny ny hatsaran-tarehinao ny lehilahy iray